I-Luxor Temple ukuvakashelwa okubalulekile okufanele ukwazi | Ukuhamba kwe-Absolut
USusana godoy | | I-Egypt
Idolobha lasendulo laseGibhithe iThebes lisashiya isibonelo esihle salokho eyayiyikho. Kuyiqiniso ukuthi isivele isesimweni samanxiwa, kepha okukodwa okufanelekile ukuvakashelwa. Kulolu hambo sizohlangana naye Ithempeli laseLuxor. Enye yezindawo ezivelele kakhulu emlandweni waseGibhithe.
Kakhulu kangangokuthi sisengabona ukuthi ingxenye ye- umlando ngisho nezinganekwane zawo, basaphumule kule ndawo. Namuhla sizobheka konke lokhu, sizobheka emuva bese sithola konke okufihlayo, okungeyona imininingwane embalwa nje. Ngabe singena ethempelini laseLuxor?
1 Likuphi iThempeli laseLuxor
2 Umlando wethempeli
3 Izingxenye eziyinhloko zethempeli laseLuxor
4 Kubiza malini ukungena kwethempeli?
5 Ukujabulela nini ukuvakashela i-Luxor Temple?
Likuphi iThempeli laseLuxor
Ibizwa ngaleli gama ngokunembile ngoba itholakala eLuxor, okuyidolobha elavuka endaweni yeThebes. lokhu, njengoba usuvele uyazi, inhlokodolobha yaseGibhithe lasendulo. Eceleni komfula iNayile kukhona iLuxor, engenye yezindawo ezinkulu, njengoba sisho. Indawo enehlane futhi efinyelela ku-40º nangaphezulu, ngesikhathi sasehlobo. Igama lendawo linikezwa ukubonga ezigodlweni noma emathempelini ayekuyo: Kokubili lowo namuhla oyinhloko futhi ozinikezele ku-Amun-Ra nakwaKarnak. Ngakho-ke uma ufuna ukubona iThempeli laseLuxor kuzofanele ungene edolobheni ngoba liphakathi kwalo.
Leli thempeli lakhiwa ngesikhathi soMbuso omusha. Ngaphezu kwalokho, ixhunyaniswe nenye esisanda kuyisho, okuyiKarnak. Kwakuwuhlobo lwe-avenue lezo zindawo zombili ezabelwana ngalo futhi lwalugcwele ama-sphinxes. Ngakho-ke indawo yethempeli iya ngokuba ngaphezu kobubanzi. Ngenye yezindawo ezazinezingxenye eziningi zokuzithola. Njengeqiniso elibalulekile, kuyadingeka ukwazi ukuthi lakhiwa ngoFaro abathathu okwakungu-Amenhotep III owayephethe ukukhulisa indawo yangaphakathi. Ngakolunye uhlangothi, owesibili we OFaro kwakunguRamses II owazithathela yena ukuthi ayiqedele.
Yize bekuyibo abaphambili, kuyiqiniso ukuthi bekukhona abanye abengeze imininingwane kule ndawo, ngezindlela zokuhlobisa ezifana nalezi azibekile UTutankhamun ngisho no-Alexander the Great. Kusukela ngezikhathi zamaRoma yaba ngelinye lamakamu ezempi abaluleke kakhulu. Kuyiqiniso ukuthi eminyakeni edlule izingxenye ezilahlekile zilahlekile, kepha ezinye eziningi zisasele. Ungabona ama-patio namakamelo, asenamatayela awo.
Izingxenye eziyinhloko zethempeli laseLuxor
Vele, oFaro babezikhokhela izindleko uma kuziwa ekwakheni ithempeli elinikezelwe kunkulunkulu. Kulokhu, kwakumiselwe uNkulunkulu wezulu nelanga. Ngakho-ke kwakumele kwenziwe okuthile ngokufanele. Ngakho-ke, ngakolunye uhlangothi, sithola okwaziwayo 'amadromo'. Igama elilingana ne-avenue noma ingxenye emaphakathi ezokwazi ukuwela. Uma ufika emnyango wangaphambili wamukelwa ngamatshe amakhulu amakhulu. Yize kufanele kucaciswe ukuthi omunye wabo wayiswa ePlaza de la Concorde eParis.
Yize kunjalo, sihlatshwa umxhwele yizithombe ezimbili ezihleli ohlangothini ngalunye futhi ezinikeza ukwamukelwa okuhle kakhulu. Njengoba njengoba sisho, ziphambi komnyango futhi ziyizithombe zikaRamses II. Uma usungaphakathi ungabaza indawo ye-patio, kanye nompheme noma i-atrium. Izingcezu ezibalulekile zethempeli uqobo. Endabeni yamagumbi sithola igumbi lokunikela kanye negumbi elinikezelwe kulo UMut owayengunkulunkulukazi wezulu futhi nenye, enikelwe kuJonsu owayenguNkulunkulu wenyanga. Ngaphandle kokukhohlwa igumbi lokuzalwa kanye nezindawo ezingcwele ezahlukahlukene. Ngaphandle kokukhohlwa ukuthi nasengxenyeni esenyakatho, ine-mosque, ngaleyo ndlela ihlanganisa imininingwane yaseGibhithe neyamaSulumane.
Kubiza malini ukungena kwethempeli?
Iqiniso ukuthi uLuxor unamakhona angenamkhawulo ongawathola. Ngakho-ke lapho sifuna ukukwenza ngokuphelele hhayi nje ukubheka ithempeli, kungakuhle ukuthi ukhethe umhlahlandlela. Endabeni yethempeli, futhi kuyindlela enhle kuzo zonke izingxenye ezinazo nakuzo zonke izindaba ezikulezo nalezi. I- intengo yokuvakashela ethempelini laseLuxor Kungu-7,50 euros, okusho ushintsho kupondo waseGibhithe cishe i-140 EGP. Ngenkathi ithempeli elingumakhelwane, iKarnak inentengo ka-150 EGP okungaba cishe ama-euro ayi-8 (Unayo nje amakhilomitha ambalwa futhi uxhunywe yi-avenue ye-Sphinxes). Lona futhi unemnyuziyamu evulekile, esingakhokhela i-EGP engama-80, okungukuthi, ama-euro angu-4,27. Khumbula ukuthi amahora angahluka, ngakho-ke kungcono ukubuza ngaphambilini.
Ukujabulela nini ukuvakashela i-Luxor Temple?
Kuyiqiniso ukuthi sihlala sithambekele ekukhetheni isikhathi sasehlobo ukwenza lolu hlobo lohambo. Ngoba yilapho sinamaholide ngempela. Kepha kulokhu i- izinyanga zasekwindla. Ngaphezu kwanoma yini ngoba ehlobo amazinga okushisa aphakeme ngempela, enyuka aya ku-40º. Ngaphandle kwalokho kunokuhlangana kwabantu okuningi. Kuyiqiniso ukuthi ukuthola le ndawo cishe engenalutho kuwumsebenzi onzima kakhulu. Kepha ukusuka kude nezinyanga ezinesici esikhulu nokukhetha ezokwindla, singahamba ngokukhululeka kakhudlwana.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Ithempeli laseLuxor